RASMI: Angel di Maria Oo Heshiis Cusub U Saxeexay PSG & Muddada Uu Sii Joogayo Parc des Princes | Laacibnet.net
HomeSuuqa Kala IibsigaRASMI: Angel di Maria Oo Heshiis Cusub U Saxeexay PSG & Muddada Uu Sii Joogayo Parc des Princes
RASMI: Angel di Maria Oo Heshiis Cusub U Saxeexay PSG & Muddada Uu Sii Joogayo Parc des Princes
Xiddiga reer Argentina ee Angel di Maria ayaa qalinka ku duugay heshiis cusub oo sannad ah oo uu kusii joogayo kooxda reer France ee PSG, kaas oo meesha ka saaraya xantii ahayd inuu ka tegi doono dhamaadka xilli ciyaareedkan.
PSG ayaa Jimcihii maanta ku dhawaaqday in Angel di Maria uu saxeexay heshiis sannad ah oo uu ku kordhiyey qandaraaskiisa, waxaana la socda 12 bilood oo kale oo doorasho ah oo lagu kordhin doono heshiiska haddii ay labada dhinac isla meel dhigaan.
Heshiiskan cusub ayaa Di Maria kusii hayn doona Parc des Princes illaa badhtamaha sannadka 2022, waxaana uu naawilayaa inuu sii kordhisto koobabka tirada badan ee uu ku guuleystay iyo raacdada kale ee ah inuu la qaado Champions League.
Waayihii Di Maria ee PSG
Angel di Maria ayaa kooxda reer France ay sannadkii 2015 kasoo iibsatay Manchester United oo sannad niyad-jab ah uu ku qaatay kaddib markii uu ka yimid Real Madrid oo uu lasoo qaaday Champions League.
Laacibkan ayaa PSG la qaaday 16 koob muddadii lixda sannadood ahayd ee uu joogay, kuwaas oo ay ku jiraan afar horyaalka Faransiiska ee Ligue 1 iyo koobabka kale ee maxalliga ah, iyadoo xilli ciyaareedkii horena uu qayb ka ahaa xiddigihii gaadhay finalka Champions League ee ay Bayern Munich ka qaadday.
248 ciyaarood oo uu saftay ayuu u dhaliyey 87 gool iyo 99 gool oo kale oo uu caawiye ka noqday, taas oo ka dhigaysa mid ka mid ah xiddigaha ugu waxqabadka badnaa kooxda.
Rikoodhka kooxda ayaa baal dahab ah lagaga qori doonaa inta aanu dhamaanin xilli ciyaareedkan, iyadoo uu noqon doono xiddigii ugu gool caawinta badnaa tan iyo markii la aasaasay PSG. Safet Susic oo 103 caawimood sameeyey ayaa kaliya ka horreeya, waxaana uu u baahan yahay shan gool oo kale in uu caawiyo si uu taariikhda kooxda u noqdo laacibkii u sameeyey goolasha ugu badnaa.
Waxa kale oo uu Di Maria ka mid yahay siddeedda ciyaartoy ee taariikhda PSG goolasha ugu badan dhaliyey.